” မေမေက တော်လှန်ရေးအတွက် အဖြူ၊အစိမ်းလေးဝတ်ပြီး မြေဖြူကိုင်တဲ့လက်နဲ့ အသက်ပေးခဲ့တာပါ ခလေးရေ ” – Real News
” မေမေက တော်လှန်ရေးအတွက် အဖြူ၊အစိမ်းလေးဝတ်ပြီး မြေဖြူကိုင်တဲ့လက်နဲ့ အသက်ပေးခဲ့တာပါ ခလေးရေ ”
” မေမေက တော်လှန်ရေးအတွက် အဖြူ၊အစိမ်းလေးဝတ်ပြီး မြေဖြူကိုင်တဲ့လက်နဲ့ အသက်ပေးခဲ့တာပါ ခလေးရေ ”
မေမေက အဖြူအစိမ်းဝတ် အာဇာနည်တစ်ယောက်ပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးက မေမေ့အတွက် ဂုဏ်ယူနေကြပါတယ်။ငါ့ညီမလေး အားတင်းထားပေးပါ။ မေမေတို့ပေးလိုက်ရတဲ့ အသက်တွေနဲ့ တန်အောင် ဒီကောင်တွေကို အနိုင်တိုက်ပေးမှာမို့ ပြိုလဲမသွားပါနဲ့ဦး။
အစ်မတို့အားလုံး ခလေးမလေးနဲ့ အတူရှိနေမှာပါ။(၂၈၊ ဖေဖော်ဝါရီတုန်းက ပညာရေးသပိတ်ကို အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲရာက အသက.်ေ ပးလိုက်ရတဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်တင်နွဲ့ရီရဲ့ သမီးလေးပါ)
မိသားစုမှာမိဘဖြစ်တဲ့အမေ မရှိတော့တာ ဘယ်လိုနေမလဲ။မနေ့ ကအမေ့မျက်နှာလေး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ အိမ်မှာသမီးတို့ အတူရှိကြတယ်နော်။ဒီနေ.့ တော့ အမေကသမီးတို့ ကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီလား မေမေ။မေမေ ချက်ကျွေးတဲ့ ဟင်း၊ထမင်းလေးတွေကို သမီးတို့ စားချင်နေသေးတယ်မေမေ။
မေမေ ရယ်သမီးအရမ်းသတိရတယ် မေမေပြေနေဆူနေတဲ့ စကားလေးတွေသမီးကြားလို့ မဝသေးဘူးမေမေ။အမေဟာ သားသမီးတိုင်းအတွက် အရှားပါးဆုံးအဖိုးတန်ရတနာပါ။အမေရှိနေစဉ် အမေစကားနားထောင်၊အမေပြောသမျှနာခံပေးကြပါ
သားတို့ သမီးတို့ ရေ၊မင်းတို့ အမေဟာ အတ္တကြီးတဲ့မိန်းမသားကြီးဖြစ်ပေမယ့် မင်းတို့ အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးတွေကိုမှ ပြောပြပေးတဲ့ လမ်းပြပေးတဲ့ အလင်းရောင်ဖန်စင်းရှင်ပါ။ပြောစရာစကားလုံးရှာမတွေ့ တော့ထိ မျက်ရည်တွေစီးဆင်းလာတဲ့ သမီးလေးမျက်နာမျိုးလေးတွေ ဘယ်လောက်မြင်စေချင်ကြသေးတာလဲ?
” မမေကေ တျောလှနျရေးအတှကျ အဖွူ၊အစိမျးလေးဝတျပွီး မွဖွေူကိုငျတဲ့လကျနဲ့ အသကျပေးခဲ့တာပါ ခလေးရေ ”
မမေကေ အဖွူအစိမျးဝတျ အာဇာနညျတဈယောကျပါ။ တဈနိုငျငံလုံးက မမေအေ့တှကျ ဂုဏျယူနကွေပါတယျ။ငါ့ညီမလေး အားတငျးထားပေးပါ။ မမေတေို့ပေးလိုကျရတဲ့ အသကျတှနေဲ့ တနျအောငျ ဒီကောငျတှကေို အနိုငျတိုကျပေးမှာမို့ ပွိုလဲမသှားပါနဲ့ဦး။
အဈမတို့အားလုံး ခလေးမလေးနဲ့ အတူရှိနမှောပါ။(၂၈၊ ဖဖေျောဝါရီတုနျးက ပညာရေးသပိတျကို အကွမျးဖကျဖွိုခှဲရာက အသက.ျေ ပးလိုကျရတဲ့ ဆရာမကွီး ဒျေါတငျနှဲ့ရီရဲ့ သမီးလေးပါ)
မိသားစုမှာမိဘဖွဈတဲ့အမေ မရှိတော့တာ ဘယျလိုနမေလဲ။မနေ့ ကအမမေ့ကျြနှာလေး ပွုံးပွုံးရှငျရှငျနဲ့ အိမျမှာသမီးတို့ အတူရှိကွတယျနျော။ဒီနေ.့ တော့ အမကေသမီးတို့ ကို နှုတျဆကျခဲ့ပွီလား မမေေ။မမေေ ခကျြကြှေးတဲ့ ဟငျး၊ထမငျးလေးတှကေို သမီးတို့ စားခငျြနသေေးတယျမမေေ။
မမေေ ရယျသမီးအရမျးသတိရတယျ မမေပွေနေဆေူနတေဲ့ စကားလေးတှသေမီးကွားလို့ မဝသေးဘူးမမေေ။အမဟော သားသမီးတိုငျးအတှကျ အရှားပါးဆုံးအဖိုးတနျရတနာပါ။အမရှေိနစေဉျ အမစေကားနားထောငျ၊အမပွေောသမြှနာခံပေးကွပါ
သားတို့ သမီးတို့ ရေ၊မငျးတို့ အမဟော အတ်တကွီးတဲ့မိနျးမသားကွီးဖွဈပမေယျ့ မငျးတို့ အတှကျတော့ အကောငျးဆုံးတှကေိုမှ ပွောပွပေးတဲ့ လမျးပွပေးတဲ့ အလငျးရောငျဖနျစငျးရှငျပါ။ပွောစရာစကားလုံးရှာမတှေ့ တော့ထိ မကျြရညျတှစေီးဆငျးလာတဲ့ သမီးလေးမကျြနာမြိုးလေးတှေ ဘယျလောကျမွငျစခေငျြကွသေးတာလဲ?
ငါ့လက်ထဲ ကိုင်ထားတာ လေးဂွမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကရင်တပ်ဖွဲ့နှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ( ရုပ်သံ )
ပိုက်ဆံ၁၀သိန်းလှူဒါန်းရင်း ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းကိုဟိန်းထွဋ်အောင်ရဲ့ မိခင်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ချယ်ရီသင်း